Title: Collected Burmese Laws of 1956 (English, Burmese (မြန်မာဘာသာ)
Title: Collected Burmese Laws of 1956 (English, Burmese (မြန်မာဘာသာ) Table of Contents
Title: Agrarian Law of 6th December 1956 - ၁၉၅၆ ခုနှစ်၊ လယ်ယာမြေနိုင်ငံပိုင်ပြုလုပ်ရေးအက်ဥပဒေ
Title: Parliament of the Union of Burma Law No. 17/1956 - Agreement between the Union of Burma and International Bank for Reconstruction and Development Act, 1956 - ၁၉၅၆ ခုနှစ်၊ ငွေချေးယူခြင်းနှင့်ေ�
Title: Parliament of the Union of Burma Law No. 21/1956 - The supplementary Appropriation Act, 1956 - ၁၉၅၆ ခုနှစ်၊ နောက်ထပ်ဘဏာတော်ငွေခွဲဝေသုံးစွဲရေး အက်ဥပဒေ
Title: Parliament of the Union of Burma Law No. 29/1956 - The Minerals Resources Development Corporation (Amendment) Act, 1956 - ၁၉၅၆ ခုနှစ်၊ ဓါတ်သတ္တုပင်ရင်းအခြေအမြစ်များကို တ�
Title: Parliament of the Union of Burma Law No. 24/1956 - The Appropriation Act, 1956 - ၁၉၅၆ ခုနှစ်၊ ဘဏာတော်ငွေခွဲဝေသုံးစွဲရေး အက်ဥပဒေ
Title: Administration of Chin State Law of 2nd November 1956 - ချင်းရေးရာဝန်ကြီးဌာန အရပ်ရပ်စီရင်အုပ်ချုပ်မှုဌာနခွဲ(၁)
Title: Parliament of the Union of Burma Law No. 18/1956 - ၁၉၅၆ ခုနှစ်၊ ကင်းလွတ်ချမ်းသာခွင့်နှင့်တည်မြဲရေးအက်ဥပဒေ
Title: Parliament of the Union of Burma Law No. 19/1956 - ၁၉၅၆ ခုနှစ်၊ ပြည့်တန်ဆာ ပပျောက်ရေး (ပြင်ဆင်ချက်) အက်ဥပဒေ
Title: Parliament of the Union of Burma Law No. 20/1956 - The Parliamentary Election (Second Amendment) Act, 1956 - ၁၉၅၆ ခုနှစ်၊ ပါလီမန်ရွေးကောက်ပွဲ (ဒုတိယပြင်ဆင်ချက်) �
Title: Parliament of the Union of Burma Law No. 47/1956 - ၁၉၅၆ ခုနှစ်၊ ရောင်းဝယ်လုပ်ကိုင်မှု ဥပစာခွန် အက်ဥပဒေ
Title: Parliament of the Union of Burma Law No. 43/1956 - ၁၉၅၆ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ ပြည်တွင်းရေကြောင်း သယ်ယူပို့ဆောင�
Title: Parliament of the Union of Burma Law No. 44/1956 - ၁၉၅၆ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ လေကြောင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအဖွဲ့ (�
Title: Parliament of the Union of Burma Law No. 45/1956 - The Industries Development Corporation (Amendment) Act, 1956 - ၁၉၅၆ ခုနှစ်၊ စက်မှုလက်မှုတိုးချဲ့လုပ်ကိုင်ရေး ကော
Title: Parliament of the Union of Burma Law No. 35/1956 - ၁၉၅၆ ခုနှစ်၊ နိုင်ငံတော်ပြည်သူ့အိုးအိမ်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးနှင့် မြို့ရွာ
Title: Parliament of the Union of Burma Law No. 36/1956 - ၁၉၅၆ ခုနှစ်၊ အစိုးရအိမ်ဥပစာ (နှင်ထုတ်ခြင်း) (ပြင်ဆင်ချက်)အက်ဥပဒေ
Title: Parliament of the Union of Burma Law No. 37/1956 - The Member of Parliament Salaries and Allowances (Amendment) Act, 1956 - ၁၉၅၆ ခုနှစ်၊ ပါလီမန်အမတ်များ (လစာနှင့်စရိတ်ကြေ�
Title: Parliament of the Union of Burma Law No. 38/1956 - The Parliament of the Union of Burma Salaries of the Speaker's and Duputy Speaker's of the member of Nationalities and Chamber of Deputies (Amendment) Act, 1956 - ၁၉၅၆ ခုနှစ်�
Title: Parliament of the Union of Burma Law No. 39/1956 - ၁၉၅၆ ခုနှစ်၊ နိုင်ငံတော်ကောက်ပဲသီးနှံရောင်းဝယ်ရေးအဖွဲ့ (ဒုတိယပြင်ဆင်ချ�
Title: Parliament of the Union of Burma Law No. 41/1956 - ၁၉၅၆ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ လက်တွေ့သုတေသနလုပ်ငန်းအဖွဲ့ (ပြင်ဆ�
Title: Parliament of the Union of Burma Law No. 42/1956 - The Union of Burma Railway Management Board (Amendment) Act, 1956 - ၁၉၅၆ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ မီးရထားအု�
Title: Parliament of the Union of Burma Law No. 22/1956 - The Finance Act, 1956 - ၁၉၅၆ ခုနှစ်၊ ဘဏာတော်အက်ဥပဒေ
Title: Parliament of the Union of Burma Law No. 31/1956 - The Loan and Guarantee (International Bank for Reconstruction and Development) (Amendment) Act, 1956 - ၁၉၅၆ ခုနှစ်၊ ငွေချေးယူခြင်းနှင့်ချေ
Title: Parliament of the Union of Burma Law No. 32/1956 - The Sales Tax (Amendment) Act, 1956 - ၁၉၅၆ ခုနှစ်၊ ရောင်းခွန် (ပြင်ဆင်ချက်) အက်ဥပဒေ
Title: Parliament of the Union of Burma Law No. 23/1956 - ၁၉၅၆ ခုနှစ်၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဘဏာရေးကော်ပိုရေးရှင်းသဘောတူစာချုပ် အက်ဥပ�
Title: Parliament of the Union of Burma Law No. 1/1956 - ၁၉၅၆ ခုနှစ်၊ ပါလီမန်အတွင်းဝန်များ (ပြင်ဆင်ချက်) အက်ဥပဒေ
Title: Parliament of the Union of Burma Law No. 15/1956 - The Cooperative Societies Act, 1956 - ၁၉၅၆ ခုနှစ်၊ သမဝါယမအသင်းများ အက်ဥပဒေ
Title: Parliament of the Union of Burma Law No. 2/1956 - The Supplementary Appropriation Act, 1956 - ၁၉၅၆ ခုနှစ်၊ နောက်ထပ်ဘဏာတော်ငွေခွဲဝေသုံးစွဲရေး အက်ဥပဒေ
Title: Parliament of the Union of Burma Law No. 5/1956 - The Union Youth Central Council (Amendment) Act, 1956 - ၁၉၅၆ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလူငယ်ရေးရာ ဗဟိုကောင်စီ (ပြင်ဆ
Title: Parliament of the Union of Burma Law No. 9/1956 - The Union Judiciary (Amendment) Act, 1956 - ၁၉၅၆ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုတရားစီရင်ရေး (ပြင်ဆင်ချက်) အက်ဥပေ�
Title: Parliament of the Union of Burma Law No. 11/1956 - The Parliamentary Election (Amendment) Act, 1956 - ၁၉၅၆ ခုနှစ်၊ ပါလီမန်ရွေးကောက်ပွဲ (ပြင်ဆင်ချက်) အက်ဥပဒေ
Title: Parliament of the Union of Burma Law No. 7/1956 - The Electricity Supply (Amendment) Act, 1956 - ၁၉၅၆ ခုနှစ်၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေး (ပြင်ဆင်ချက်) အက်ဥပဒေ
Title: Parliament of the Union of Burma Law No. 10/1956 - ၁၉၆၅ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံကာကွယ်ရေး (စစ်ဆင်မှုအထူးစီမံချက်)
Title: Parliament of the Union of Burma Law No. 8/1956 - ၁၉၅၆ ခုနှစ်၊ လူမှုဖူလုံရေး (ပြင်ဆင်ချက်) အက်ဥပဒေ
Title: Parliament of the Union of Burma Law No. 3/1956 - ၁၉၅၆ ခုနှစ်၊ နိုင်ငံတော်ကောက်ပဲသီးနှံရောင်းဝယ်ရေးအဖွဲ့ (ပြင်ဆင်ချက်အက်ဥ
Title: Parliament of the Union of Burma Law No. 4/1956 - ၁၉၅၆ ခုနှစ်၊ မော်လမြိုင်မြို့ကုလားတန်းစူရတီဈေးကို မြူနီစီပါယ်ပိုင်ပြု�
Title: Parliament of the Union of Burma Law No. 27/1956 - ၁၉၅၆ ခုနှစ်၊ နိုင်ငံတော်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဘဏ် (ပြင်ဆင်ချက်) အက်ဥပဒေ